उपनिर्वाचनमा विद्या भट्टराईले जित्ने सम्भावना कति ?
काठमाडौँ । कास्की क्षेत्र नम्बर २ मा उपनिर्वाचनको सरगर्मी बढिरहेको छ । प्रचारप्रसारमा दलहरु लागि रहेका छन् भने कसले जित्ने चर्चा पनि उत्तिकै चलिरहेको छ । आफ्नो दलले उपनिर्वाचनमा बाजी मार्ने बताइरहँदा कसको प्रचारमा कति धेरै कार्यकर्ता देखाउने प्रतिस्पर्धा पनि उत्तिकै देखिएको छ ।
केही शिर्ष नेताहरु उपनिर्वाचनमा सघाउन समेत लागि परेका छन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का तर्फबाट प्रत्यासी उम्मेदवार विद्या भट्टराई अधिकारीले समृद्ध देशका लागि उद्यमशिल युवा बनाउनु पर्ने बताएकी छन् ।
भट्टराईले समृद्ध नेपाल निर्माणको लागि एक आधारशिला वर्तमान सरकारको लक्ष्य भएको हुँदा सो प्राप्तिका लागि युवाहरूलाई उद्यमशिल बनाउन र उत्पादनमुखी काममा सरिक बनाउन आफु विशेष जोड दिने बताईन् ।
उनले कम्युनिष्टहरू अग्रगामी हुने हुँदा समाज र राष्ट्रलाई अगाडि बढाउन कम्युनिष्ट पार्टीका प्रतिनिधिहरूले जनचाहनाको उच्च कदर गर्दै आफ्ना कार्यहरू सो कुरामा केन्द्रीत गर्नुपर्ने बताईन् । भट्टराईले सो कुरा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ४ का जनताहरूसँग प्रत्यक्ष भेट पश्चात आयोजित कोणसभालाई सोमबार सम्बोधन गर्दै बताएकी हुन् ।
विगतको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले वाचागरेका प्रतिवद्धताहरू र जनताका आकांक्षाहरू आफ्नो निर्वाचनको केन्द्रविन्दू रहेको भन्दै सोही अनुसार आफु अघि बढ्ने बताईन् । जन सहभागिता बिना राजनीतिक भूमिका विस्तार हुन नसक्ने र प्रभावकारी राजनीतिक भूभिका बिना सभ्य र विकसित समाजको निर्माण हुन नसक्ने भन्दै सबै जनताहरू राजनीतिकरूपमा सचेत भएर जन प्रतिनिधिहरूलाई निरन्तर खवरदारी गर्न आग्रह गरिन् ।
यसअघि भट्टराईले सोमबार बिहान सो वडाको नालाको मुख स्थित नेपाली राजनीतिका लौह पुरुष स्व। गणेशमान सिंहको शालिकमा माल्र्यापर्ण गरी उक्त वडाको जनताहरूसँग भेटघाट शुरू गरेकी थिईन् । सयौं नेता, कार्यकर्ताहरूका साथमा जनसाक्षात्कार गरेकी उम्मेदवार भट्टराईलाई सो वडाका वासिन्दाहरूले दोब्बर मतले निर्वाचित गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।